Gripa miparitaka etsy sy eroa Tsy manao reraka be loatra no fisorohana azy
Ady amin’ny kitrotro Zaza 7 tapitrisa no hovitaina vaksiny
Notanterahina teo anivon’ny Primatiora teny Mahazoarivo omaly 15 janoary ny fivoriana mikasika ny valanaretina Kitrotro izay notarihin’ny praiminisitra Ntsay Christian,
Fahasalaman’ny tanora Mbola ambany ny tahan’ny fampiasana fandrindram-piterahana
Ny 37%-n’ny ankizivavy eo anelanelan’ny 15 hatramin’ny 19 taona eto amintsika dia efa niteraka 1 avokoa na mitoe-jaza. Antontan’isa vokatry ny fanadihadiana nataon’ny INSTAT tamin’ny taona 2012 – 2013 io.
Dia an-tongotra voalanjalanja Tena mahasalama sy misoroka aretina
Anisan’ny misoroka aretina maro ny fanaovana dia an-tongotra isan’andro. Anisan’ireny ny aretina diabeta izay mamono olona marobe tokoa maneran-tany, ny hatavezana diso tafahoatra, ny aretin’ny tosidra …
Kitrotro miparitaka any amin’ny faritra Zaza am-bolana tsy vita vaksiny no tena lasibatra
Nitondra fanazavana mikasika ireo ankizy marobe lasibatry ny kitrotro any amin’ny faritra ny minisiteran’ny Fahasalam-bahoaka omaly. Anisan’izany ny any Ambatoboeny, Toamasina, Mahajanga ary ny etsy amin’ny distrikan’Ambohidratrimo Faritra Analamanga.
Aretim-pivalalana Mirongatra indray
Tafiditra tanteraka ao anatin’ny vanim-potoanan’ny fahavaratra isika ankehitriny.
Ady amin’ny kitrotro Hisy ny fanaovam-baksiny faobe ato ho ato
Raha miha mahazo vahana ny resa-politika eto amintsika dia misoko mangina tsy mamela mahazo ihany koa ny aretina kitrotro.
Aretina diabeta Ela velona kokoa ireo voany raha mahay mitaiza vatana
Na dia anisan’ny aretina mahavoa olona betsaka aza ny aretina diabeta maneran-tany dia fantatra kosa fa ela velona kokoa ireo voany raha mahay mitaiza vatana.
Tsy vokatry ny loto akory fa vokatr’ireo karazana viriosy mifindra amin’ny olombelona samy olombelona ary mahazo aina rehefa somary mangatsiaka ny andro ilay gripa mahery mahazo ny ankamaroan’ny olona amin’izao, hoy Atoa Ratsirarson Joséa, sekretera jeneraly eo anivon’ny ministeran’ny fahasalamam-bahoaka.
Tsy voatery ho amin’ny vanim-potoanan’ny ririnina anefa izy io no mitranga, hoy izy fa rehefa milatsaka ny hafanana dia efa mahazo aina izy, toy ny zava-nitranga taorian’ny rivodoza AVA farany teo iny. Na izany aza dia tsy hatahorana hamono ity karazana gripa iray ity ankoatra ireo olona efa tena antitra be na koa ireo mbola menavava. Vahaolana tsotra ny tsy fifaneraserana amin’ireo olona voan’ny gripa ho an’ireo te-hiaro tena amin’ny aretina. Toraka izany koa ny fanasana tanana amin’ny savony matetika, arahin’ny fanapenana ny vava rehefa mievona. Tsy manao reraka be loatra ny olona mba tsy ho voan’ny gripa ary mila mihinana voankazo sy hisotro ranobe hatrany, hampitomboana ny hery fiarovana ao anaty. Ho an’ireo efa marary kosa dia nomarihiny fa mila manao tampim-bava ao an-trano mba tsy hifindran’ny aretina. Tsiahivina fa ny 15 %-n’ny olona any amin’ny distrikan’Ambohidratrimo no fantatra fa voan’ity gripa mahery ity, 9 % any Vohipeno, tarehimarika vonjimaika tonga eo anivon’ny minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka.